Ahoana no Handraisan-tsoa Amin’ny Famakiana Baiboly? | Fianarana
“Tena mahafinaritra ahy ny lalàn’Andriamanitra.”—ROM. 7:22.
KAROHY IRETO HEVITRA IRETO:
Inona no soa horaisinao raha mamaky milamina tsara ianao rehefa mamaky Baiboly, sady misaintsaina?
Inona no tokony hataonao, raha tianao ny hahay andinin-teny betsaka mba hanampiana olona?
Nahoana no lazaina fa miaro antsika ny famakiana Baiboly?
1-3. Inona no soa horaisintsika, raha mianatra ny Baiboly isika ary mampihatra izay voalaza ao?
HOY ny anabavy be taona iray: “Misaotra an’i Jehovah isa-maraina aho noho izy manampy ahy hahazo izay lazain’ny Baiboly.” Efa in-40 mahery izy no nahavaky ny Baiboly manontolo, ary mbola mamaky foana. Nilaza koa ny anabavy tanora iray fa ny famakiana Baiboly no nanampy azy ho resy lahatra hoe tena misy i Jehovah. Lasa nifandray kokoa tamin’ilay Raintsika any an-danitra izy vokatr’izany. Hoy izy: “Mbola tsy nahatsiaro ho faly hoatr’izany mihitsy aho!”
2 Nampirisika antsika rehetra ny apostoly Petera mba ‘haniry fatratra ny ronono tsy misy fangarony, dia ny ronono ao amin’ny tenin’Andriamanitra.’ (1 Pet. 2:2) Manome fahafaham-po an’izany faniriana izany isika rehefa mianatra Baiboly. Raha manao izany isika sady mampihatra izay ianarantsika, dia hanana feon’ny fieritreretana madio, ary hisy zava-kendrena ny fiainantsika. Hahazo namana tsara koa isika, dia namana tia sy manompo an’ilay tena Andriamanitra. Tena tokony ‘hahafinaritra antsika ny lalàn’Andriamanitra’ noho izany. (Rom. 7:22) Mbola misy soa hafa koa anefa raisintsika rehefa mianatra Baiboly isika.
3 Arakaraka ny ianarantsika momba an’i Jehovah sy Jesosy, dia vao mainka hitombo ny fitiavantsika azy ireo sy ny mpiara-belona amintsika. Ho fantatsika koa hoe inona no hataon’Andriamanitra tsy ho ela, mba hanavotana ny olombelona mankatò rehefa horinganina ity tontolo ity. Hanana vaovao tsara hozaraina amin’ny olona koa isika. Hotahin’i Jehovah isika, raha ampahafantarintsika ny olona izay nianarantsika tao amin’ny Tenin’Andriamanitra.
VAKIO SY SAINTSAINO
4. Inona no dikan’ilay tenin’ny mpanao salamo hoe ‘vakina moramora’ ny Baiboly?
4 Tsy tian’i Jehovah hoe hamaky haingankaingana be fotsiny isika, rehefa mamaky ny Teniny. Hoy ny Baiboly: “Ny lalàn’i Jehovah no mahafinaritra azy, eny, ny lalàny no vakiny moramora andro aman’alina.” (Sal. 1:2; Jos. 1:8) Midika ve anefa izany hoe tsy maintsy vakintsika amin’ny feo iva izay teny rehetra vakintsika ao amin’ny Baiboly, hatrany amin’ny Genesisy ka hatrany amin’ny Apokalypsy? Tsia. Midika kosa izany hoe tokony hatao milamina tsara ny vakitenintsika, mba hahatonga antsika hisaintsaina an’ilay zavatra vakintsika. Rehefa manao izany isika, dia ho afaka hifantoka amin’izay andinin-teny tena ilaintsika sy mampahery antsika. Rehefa misy teny, na andinin-teny, na tantara mampahery hitanao ao, dia vakio miadana ilay izy, ary tonòny amin’ny vavanao mihitsy raha tianao. Tena hanohina ny fonao ilay zavatra vakinao amin’izay. Tena ilaina izany, satria rehefa azonao tsara ny zavatra voalazan’Andriamanitra, dia tena ho vonona ianao hampihatra an’ilay izy.
5-7. Hazavao amin’ny ohatra hoe nahoana ny fisaintsainana ny Tenin’Andriamanitra no manampy antsika: a) hadio fitondran-tena; b) hanam-paharetana sy ho tsara fanahy; ary d) hatoky an’i Jehovah na dia rehefa misy zava-tsarotra aza.
5 Tena ilaina ny mamaky milamina tsara sy misaintsaina, rehefa mamaky an’ireo boky tsy dia mahazatra antsika ao amin’ny Baiboly. Misy toe-javatra telo ireto mampiseho izany. Voalohany, eritrereto hoe mamaky ny faminanian’i Hosea ny rahalahy tanora iray. Rehefa avy namaky ny Hosea 4:11-13 izy, dia nijanona kely nisaintsaina. (Vakio ny Hosea 4:11-13.) Nahoana? Satria miady mafy izy any am-pianarana mba tsy ho voataona haloto fitondran-tena. Rehefa nisaintsaina an’ilay andinin-teny izy, dia tsapany fa hitan’i Jehovah ny olona rehefa manao ratsy, na dia rehefa irery aza. Tsy te hampahatezitra an’i Jehovah izy, ka tapa-kevitra fa hanaraka foana ny fitsipik’i Jehovah momba ny fitondran-tena.
6 Faharoa, misy anabavy anankiray mamaky ny faminanian’i Joela. Nisaintsaina toy izao izy rehefa tonga teo amin’ny Joela 2:13: ‘Ahoana no ahafahako manahaka an’i Jehovah, izay “tsara fanahy sy mamindra fo, tsy mora tezitra, ary be hatsaram-panahy feno fitiavana”?’ (Vakio ny Joela 2:13.) Tapa-kevitra àry izy fa hiova, ka tsy hanao teny maneso sy masiaka intsony, rehefa miresaka amin’ny vadiny sy ny olon-kafa.
7 Fahatelo, misy raim-pianakaviana iray very asa, ary manahy hoe ahoana no hamelomany ny vady aman-janany. Mamaky ny bokin’i Nahoma izy. Nisaintsaina izy rehefa tonga teo amin’ny Nahoma 1:7, izay milaza hoe ‘fantatr’i Jehovah izay mitady fialofana eo aminy’, ary “fiarovana mafy amin’ny andro fahoriana” izy. Nampahery azy izany. Lasa takany hoe miahy azy i Jehovah, ka tsy nanahy be intsony izy. Nanohy ny vakiteniny izy, ary nisaintsaina indray rehefa tonga teo amin’ny andininy faha-15. (Vakio ny Nahoma 1:15.) Hitany avy tamin’ilay vakiteny hoe raha mihevitra an’i Jehovah ho fiarovana mafy ho azy izy, dia mandeha mitory na dia miatrika zava-tsarotra aza. Sady nitady asa àry izy no nanokana fotoana bebe kokoa hanompoana andavanandro.
8. Inona ny hevitra tena nahaliana hitanao tamin’ny famakianao Baiboly? Tantarao.
8 Maro ny olona mieritreritra fa saro-takarina ny hevitra ao amin’ny bokin’i Hosea sy Joela ary Nahoma. Avy ao amin’ireo boky ireo anefa ny ohatra nodinihintsika teo. Rehefa mamaky azy ireo ianao ka mahita andinin-teny mampahery, dia vao mainka tianao hotohizina ilay vakiteny. Mampahery antsika sy manampy antsika ho hendry tokoa ireo bokin’ny mpaminany ireo! Ary ahoana ny amin’ny boky hafa ao amin’ny Baiboly? Toy ny toeram-pitrandrahana diamondra ny Tenin’Andriamanitra. Trandrao tsara izy io! Rehefa mamaky Baiboly ianao, dia ataovy tanjona ny hahita tari-dalana sy fampaherezana avy amin’Andriamanitra, izay toy ny diamondra sarobidy.
MIEZAHA MAFY HAHAZO IZAY VAKINAO
9. Inona no azontsika atao raha tiantsika ny hahazo tsara izay voalazan’ny Baiboly?
9 Zava-dehibe ny hoe mamaky Baiboly isan’ andro, kanefa tena ilaina koa ny hoe mahazo tsara izay vakina. Ampiasao àry ny boky sy gazety navoakan’ny fandaminan’i Jehovah, mba hahafantaranao ny mombamomba ny olona sy ny toerana ary ny zava-mitranga ao amin’ilay zavatra vakinao. Azonao atao koa ny manontany anti-panahy na Kristianina matotra hafa, raha tsy azonao antoka hoe ahoana no tokony hampiharanao ny fampianaran’ny Baiboly sasany. Handinika ny ohatra navelan’ny Kristianina iray tamin’ny taonjato voalohany isika izao, mba hahitantsika fa tena ilaina ny miezaka hahazo tsara ny fahamarinana. Apolosy no anarany.
10, 11. a) Ahoana no nanampiana an’i Apolosy mba hanatsara ny fanompoany? b) Inona no ianarantsika avy amin’ny ohatr’i Apolosy? (Jereo ny efajoro etsy ambony.)
10 Kristianina jiosy i Apolosy, ary “tena nahay Soratra Masina” sady “narehitry ny fanahy.” Milaza ny Baiboly fa “marina ny fitoriany sy ny fampianarany momba an’i Jesosy.” “Ny batisan’i Jaona ihany” anefa no fantany, ka lany andro ny zavatra nampianariny momba ny batisa. Ren’ilay mpivady kristianina atao hoe Akoila sy Prisila ny fampianarana nataony tao Efesosy, ka ‘nohazavain’izy ireo taminy marina kokoa ny lalan’Andriamanitra.’ (Asa. 18:24-26) Inona no soa noraisin’i Apolosy tamin’izany?
11 Nankany Akaia i Apolosy, rehefa avy nitory tao Efesosy. Afaka ‘nanampy be an’ireo tonga mpino izy rehefa tonga tany, dia ireo nino noho ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra. Tamin-kery mantsy no nanaporofoany mazava ampahibemaso tamin’ny alalan’ny Soratra Masina fa diso ny Jiosy, satria i Jesosy no Kristy.’ (Asa. 18:27, 28) Lasa nahay nanazava marina tsara ny hevitry ny batisa kristianina i Apolosy tamin’izay, ka afaka “nanampy be” an’ireo vaovao mba handroso tao amin’ny fahamarinana. Inona no ianarantsika avy amin’io fitantarana io? Mila miezaka mafy isika mba hahazo tsara izay vakintsika ao amin’ny Baiboly, toy ny nataon’i Apolosy. Ary raha misy mpiray finoana efa mahay, ka manome soso-kevitra mba hahaizantsika mampianatra kokoa, dia tokony hanetry tena sy hahay hankasitraka isika, ka hanaiky ny soso-keviny. Hihatsara ny fanompoana masina ataontsika, raha manao izany isika.
AMPIASAO HANAMPIANA NY HAFA NY ZAVATRA NIANARANAO
12, 13. Ahoana no azontsika ampiasana ny Soratra Masina, mba hanampiana ny mpianatra Baiboly?
12 Afaka manampy olona koa isika, toy ny nataon’i Akoila sy Prisila ary Apolosy. Eritrereto ange hoe nampahery olona liana iray ianao, ka nanjary vitany ny nandresy an’ireo olana nisakana azy tsy handroso! Hanao ahoana ny fihetseham-ponao? Ary ahoana indray raha anti-panahy ianao, ary misy mpiara-manompo misaotra anao satria nahavita niatrika zava-tsarotra izy, noho ny torohevitra ara-baiboly nomenao azy? Mahafaly sy mahafa-po tokoa ny mampiasa ny Tenin’Andriamanitra, mba hanampiana olona hanatsara ny fiainany. * Ahoana anefa no fomba ampiasana ny Baiboly mba hanampiana olona?
13 Nisy Israelita maro tamin’ny andron’i Elia tsy nety nanapa-kevitra hoe hanompo an’i Jehovah izy sa tsia. Raha misy olona ampianarinao Baiboly misalasala ny handroso, dia ampiasao mba hanampiana azy ny torohevitra nomen’i Elia an’ireo Israelita. (Vakio ny 1 Mpanjaka 18:21.) Ary ahoana indray raha misy olona liana iray matahotra hoe hanakiana azy ny namany na ny fianakaviany? Afaka mampiasa ny Isaia 51:12, 13 ianao mba hampisaintsainana azy, ka hanampy azy ho tapa-kevitra hanompo an’i Jehovah.—Vakio ny Isaia 51:12, 13.
14. Inona no tokony hataonao, raha tianao ny hahatadidy andinin-teny amin’ny fotoana ilanao azy?
14 Misy hevitra maro ao amin’ny Baiboly natao hampaherezana na hanitsiana olona. Mety hieritreritra anefa ianao hoe: ‘Ahoana no ataoko mba hahatonga ahy hahatadidy andinin-teny, rehefa hanampy olona?’ Mila mamaky Baiboly sy misaintsaina ny hevitr’Andriamanitra ianao isan’andro. Hihabetsaka amin’izay ny andinin-teny ho hainao, ary ny fanahy masina avy eo no hampahatsiahy anao azy ireny, amin’ny fotoana ilanao azy.—Mar. 13:11; vakio ny Jaona 14:26. *
15. Inona no azonao atao mba hahazoanao tsara izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra?
15 Tena ilaina koa ny mivavaka sy mangataka fahendrena amin’i Jehovah, toy ny nataon’i Solomona Mpanjaka, mba hahafahanao manampy ny hafa, na eo anivon’ny fiangonana izany, na eny amin’ny fanompoana. (2 Tan. 1:7-10) Manahafa koa an’ireo mpaminany fahiny, ka manaova “fikarohana lalina” ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, mba hahazoana fahalalana marina tsara momba an’i Jehovah sy ny fikasany. (1 Pet. 1:10-12) Nampirisika an’i Timoty ny apostoly Paoly mba ‘hivelona amin’ny tenin’ny finoana sy ny tenin’ny fampianarana tsara.’ (1 Tim. 4:6) Tena ho afaka hanampy ny hafa ianao, raha mianatra tsara toy izany, sady hihamatanjaka ny finoanao.
MIARO ANTSIKA NY FAMAKIANA BAIBOLY
16. a) Inona no vokany rehefa “nandinika tsara ny Soratra Masina isan’andro” ireo Jiosy tany Beria? b) Nahoana no tena ilaintsika ankehitriny ny mamaky Baiboly isan’andro?
16 Efa fahazaran’ny Jiosy tany Beria ny “nandinika tsara ny Soratra Masina isan’andro.” Rehefa nitory ny vaovao tsara tamin’izy ireo i Paoly, dia nampitahain’izy ireo tamin’izay nianarany tao amin’ny Soratra Masina ny tenin’i Paoly. Inona no vokatr’izany? Maro no resy lahatra hoe marina ny fampianaran’i Paoly, ka “tonga mpino” izy ireo. (Asa. 17:10-12) Tena ilaina àry ny mamaky Baiboly isan’andro, mba hananana finoana matanjaka. Tena mila manana an’io finoana io isika, raha te ho tafavoaka velona ka hiaina ao amin’ny tontolo vaovao. Mila matoky isika hoe ho tanteraka ny zavatra antenaintsika.—Heb. 11:1.
17, 18. a) Miaro antsika amin’ny inona ny finoana sy ny fitiavana? b) Nahoana no lazaina fa miaro antsika ny fanantenana?
17 Tena ilaina ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana. Hoy i Paoly: ‘An’ny andro isika, ka aoka hisaina tsara foana sy hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary hitafy ny fanantenana famonjena ho fiarovan-doha.’ (1 Tes. 5:8) Nila niaro ny fony ny miaramila mba tsy ho voan’ny fahavalo. Toy izany koa ny Kristianina. Mila miaro ny fontsika isika mba tsy ho resin’ny ota. Amin’ny fomba ahoana anefa? Mila mino tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah isika, ary tia an’i Jehovah sy ny mpiara-belona amintsika. Izany no fiarovan-tratra tsara indrindra. Hiaro antsika izany mba tsy hanao zavatra mety hahatonga antsika hamoy ny fankasitrahan’i Jehovah.
18 Nilaza koa i Paoly fa mila manao fiarovan-doha isika, dia ny “fanantenana famonjena.” Mety ho faty an’ady ny miaramila, raha tsy voaro ny lohany. Mila manana fiarovan-doha mafy tsara àry izy, mba tsy haratra mafy ny lohany rehefa asian’ny fahavalo. Ny fanantenana famonjena no fiarovan-dohantsika. Lasa manantena hoe hovonjen’i Jehovah isika, raha mianatra ny Teniny. Raha mafy orina tsara io fanantenantsika io, dia ho afaka hahatohitra ny mpivadi-pinoana isika ary tsy hihaino ny “resaka tsy misy fotony” ataon’izy ireny, izay miely toy ny “fery mandoaka.” (2 Tim. 2:16-19) Ho vitantsika koa ny hanohitra an’ireo olona mitaona antsika hanao zavatra tsy tian’i Jehovah.
IANKINAN’NY AINA NY FAMAKIANA BAIBOLY
19, 20. Nahoana isika no mankasitraka ny Tenin’Andriamanitra, ary ahoana no ampisehoantsika fa tena mankamamy azy io isika? (Jereo ilay efajoro hoe “Manome Ahy Izay Ilaiko i Jehovah.”)
19 Vao mainka mila miantehitra amin’ny Tenin’i Jehovah isika, arakaraka ny anatonan’ny faran’ity tontolo ity. Manampy antsika hiala amin’ny fahazaran-dratsy sy handresy fanirian-dratsy ny torohevitra ao amin’ny Baiboly. Manampy antsika hiaritra an’ireo fitsapana ataon’i Satana sy ny tontolony ny fampaherezana ao anatiny. Ary manampy antsika handeha foana amin’ny lalana mankany amin’ny fiainana ny tari-dalana omen’i Jehovah ao amin’izy io.
20 Tadidio fa sitrapon’Andriamanitra ny “hamonjena ny karazan’olona rehetra.” Anisan’ireo “karazan’olona” ireo isika mpanompon’i Jehovah sy ireo olona ampiantsika amin’ny fitoriana sy fampianarana. Mila manana “fahalalana marina tsara ny fahamarinana” daholo anefa izay te ho voavonjy. (1 Tim. 2:4) Tsy maintsy mamaky ny Baiboly sy mampihatra izay voalaza ao isika, raha te ho tafavoaka velona. Hita hoe tena mankamamy ny Tenin’i Jehovah isika, raha mamaky azy io isan’andro.—Jaona 17:17.
^ feh. 12 Mazava ho azy fa tsy mampiasa ny Baiboly isika mba hanerena ny olona hiova na mba hanamelohana azy ireo. Tokony hanam-paharetana sy ho tsara fanahy amin’ny olona ampianarintsika kosa isika, toy ny ataon’i Jehovah amintsika.—Sal. 103:8.
^ feh. 14 Ahoana anefa raha tadidinao ny teny sasany ao amin’ilay andininy, fa tsy tsaroanao ny toko sy andininy misy azy? Mety hanampy anao ny fijerena ny Fanondroana Teny any amin’ny faran’ny Baiboly, na ny Watchtower Library amin’ny CD-ROM.
MIFANARAKA AMIN’NY FANAZAVANA FARANY VE NY FAMPIANARANAO?
Nahazo fanampiana i Apolosy ka afaka nanatsara ny fanompoany
Miezaha mba haharaka ny fanazavana farany momba ny fahamarinana, raha tianao ho marina tsara ny fahalalana ampitainao amin’ny olona. Ahoana, ohatra, no hamalianao an’ireto?
Iza ilay “taranaka” noresahin’i Jesosy ao amin’ny Matio 24:34?—Ny Tilikambo Fiambenana 15 Aprily 2010, pejy 10-11.
Rahoviana no hanomboka ny fanavahana “ny ondry amin’ny osy” resahin’ny Matio 25:32?—Ny Tilikambo Fiambenana 15 Janoary 2000, pejy 13, fanamarihana ambany pejy eo amin’ny fehintsoratra 18; Ny Tilikambo Fiambenana 15 Oktobra 1995, pejy 21-23.
Rahoviana no ho tanteraka ny Lioka 21:26 hoe “ho safotra noho ny tahotra sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin’ny tany onenana” ny olona?—Ny Tilikambo Fiambenana 15 Jolay 2010, pejy 7, fehintsoratra 18; Ny Tilikambo Fiambenana 15 Febroary 1994, pejy 19-20.
Raha mamaky Baiboly isan’andro isika, sady manao fianarana samirery tsara, dia ho haintsika ny hanampy ny olona hahafantatra ny fahamarinana, izay toy ny hazavana tsy mitsaha-mitombo.—Ohab. 4:18.
‘MANOME AHY IZAY ILAIKO I JEHOVAH’
Hoy ny anabavy tanora iray: ‘Betsaka ny zavatra ampahatsiahivin’i Jehovah antsika, fa ny fampahatsiahivana hamaky Baiboly isan’andro no tena nisy vokany teo amin’ny fiainako. Tamin’izaho namarana ny fianarako teny amin’ny lise no nanomboka namaky Baiboly, ary roa taona teo ho eo no nahavitako azy. Tao amin’ny Tenin’i Jehovah no nahitako torohevitra maro nanampy ahy hahita hoe inona no hataoko eo amin’ny fiainana. Mamaky ny Baiboly fanindroany aho izao, nefa mbola mahita hevitra vaovao foana. Mahafinaritra be toy ny tamin’ny voalohany ihany ny mamaky an’ilay izy. Mahafinaritra kokoa aza! Gaga mihitsy aho hoe tena hain’i Jehovah ny mampiasa ny Teniny mba hanomezana ahy izay ilaiko.’